Ebe juru oyi nke na ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume mmadụ bi na ya Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Meteorology, Ebili mmiri oyi
Oymyakon n'oge oyi, Siberia, Russia
Oyi na-abịa eleta anyị na ọ dị mma icheta na n'ọtụtụ oge, anyị na-eme mkpesa banyere ọjọọ. Maka nke a, anyị ga-eleba anya na ebe kachasị oyi na mbara ala ebe, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe ịtụnanya, ndị mmadụ na-ebi n'afọ niile.
Mụ amaala nke ebe dị ka Verkhoyansk, Yakutsk o Oymyakon (ma Russia) bi ndụ dị iche na nke anyị, ọbụlagodi n'oge oyi. Dị ka ihe atụ, ndị ọkwọ ụgbọala n’obodo ndị a na-ahapụ ụgbọala ha dọwara adọwa n’ebe a na-adọba ụgbọala ruo ọtụtụ awa mgbe ha na-azụ ahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ, mgbe mgbe ha na-eme ka mmanụ a na-ete mmanụ n’ọkụ ụgbọala ha dị ọkụ iji fụchaa ya.
La kasị ala okpomọkụ mgbe e dere n’elu ụwa, dịka anyị kwurula banyere ya n’isiokwu ahụ ụbọchị ole na ole gara aga, ọ mere n’otu mpaghara dị nso n’ugwu Antarctic, na-eru ụkpụrụ dị n’okpuru 92 Celsius C n’okpuru efu n’abalị ihu igwe doro anya. N’agbanyeghi n’otu n’ime obodo ndị anyị ga-edepụta nke ruru okpomọkụ ndị a, ụfọdụ n’ime ha dị oke egwu ma a bịa na ụkpụrụ ndị a. Ndi a bu ebe abuo kachasi ebi na uwa.
Dabere na onuogugu 2002, Verkhoyansk (Russia) bi na 1434; ndị nwere ike ịbanye na ndụ ha n'ọzara Siberia miri emi. E hiwere obodo a dị ka ebe ewusiri ike na 1638 ma na-eje ozi dị ka mpaghara mpaghara maka ịzụ ehi na iwepụta ọla edo na tin. Ọ dị kilomita 650 site na Yakutsh na kilomita 2400 site na mgbago mgbago ugwu. Ejiri Verkhoyansk n'ụlọ ndị ndọrọndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'etiti 1860 na mmalite nke narị afọ gara aga.
Ọ bụghị ihe ijuanya na a họọrọ ndị ahụ dọọrọ n'agha gaa Verkhoyansk. Na Jenụwarị, ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dị ka 45ºC n'okpuru efu, na n'etiti ọnwa Ọktoba na Eprel, nkezi a ka dị n'okpuru ọkwa oyi. Na 1982, ndị bi na ya debara aha okpomọkụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 68 aC n'okpuru efu, ọnọdụ okpomọkụ nke ka dị ala karịa ebe a. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a pụtara na n'oge oyi, ndị mmadụ anaghị apụ n'èzí ruo ọtụtụ ụbọchị.
Ndị bi na Oymyakon na-echetara anyị, mgbe Verkhoyansk na-ekwu na ọ bụ ebe kachasị oyi na mpaghara ugwu, na obodo ha debara aha 68ºC n'okpuru efu na February 6, 1933. Dabere na onye ị jụrụ, n'etiti 500 na 800 ndị mmadụ na-akpọ Oymyakon n'ụlọ. Oymyakon dị ụgbọala ụbọchị atọ site na Yakutsk, isi obodo Republic of Saja na ọwụwa anyanwụ Siberia. N'ebe a, ụlọ akwụkwọ ghere oghe na ogo dị n'okpuru 46ºC n'okpuru efu.
Obodo a na - ewepụ aha ya site na mmiri ọkụ, nke ụfọdụ ndị bi na ya na - eji pọmpụ mmiri ọkụ, na - agbaji nnukwu ice nke na - ekpuchi ya n’oge oyi. Oymyakon Tourism Board na-enye obodo a dị ka ebe kachasị mma maka ndị njem na-agụ agụụ na-enwe mmetụta dị egwu.
Ndị a bụ ikpe abụọ kachasị njọ, mana enwere ebe ndị ọzọ n'ụwa ebe oyi na-eme ka ndụ na omenaala ndị ya dị iche.
Ozi ndi ozo: Abnormally elu okpomọkụ ke coldest ebe, Ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa nke e detụworo n’ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Ebe dị ezigbo oyi nke na ọ dị ka ọ gaghị ekwe mmadụ omume ibi na ya